देशभर सात हजार शय्या थप गर्ने तयारी, कहाँ कति ? « LiveMandu
देशभर सात हजार शय्या थप गर्ने तयारी, कहाँ कति ?
२० बैशाख २०७८, सोमबार ०५:१९
सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि करिब सात हजार शय्या थप गर्ने भएको छ । तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका ६ अस्पतालमा आजैदेखि एक हजार शय्या थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले सरकारी र निजी अस्पतालमा थप सात हजार शय्या थप्न थालिएको जानकारी दिए । शय्या थप गरिएपछि सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नका लागि सहज हुनेछ ।
उनका अनुसार नेपाल प्रहरी अस्पतालमा ३५०, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, पिपुल्स डेन्टल अस्पताल र सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर अस्पतालमा सय–सय तथा काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजमा १५०–१५० शय्या थप गरिने भएको छ ।
ती अस्पतालमा शय्या थप गर्नका लागि मन्त्रालयले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको थियो । सहप्रवक्ता डा.अधिकारीले काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र किष्ट मेडिकल कलेजमा ४००–४०० दरका एक हजार २०० शय्या चाँडै बन्ने बताए ।
मनमोहन मेडिकल कलेजमा ३००, खरिपाटीमा २५०, पाटनस्थित मानसिक अस्पतालमा २५, पाटन अस्पतालमा ३५०, वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ५००–५०० र जनमैत्री अस्पतालमा १२० शय्या बन्नेछन् । सम्झौताअनुसार निजी अस्पतालले दुई हजार शय्या बनाउनेछन् । अहिले मुलुकभर १८ हजार ९१७ शय्या छन् ।